09/08/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Sunday, September 08, 2013, under သတင်းများ | No comments
Aung Myo Htet အကောင့်အမည်နှင့် မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေပါ။ သူမေးခွန်းကို ဖတ်ကြည့်ပြီးမှ အဖြေကိုဖတ်ကြည့်ပါ။
အရှင်ဝီရသူ အစစ်ဟုယူဆ၍ မေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မျိုးစောင့်ဥပဒေလိုမျိုး အမျိုးသမီးတွေ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ ဥပဒေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေပညာရှင် ဦးကျော်ဇေယျက မရှိဘူး လိုအပ်တယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကလဲ လိုအပ်တယ်။ အင်းစိန်ရွာမဆရာတော်ကြီးကလဲ မရှိသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာမောင်သွေးချွန်ကလဲ ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုပေမဲ့ တကယ်တမ်း ဥပဒေအရာမဝင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလဲ ဦးကိုနီက အလားတူဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးကို ကာကွယ်ပေးမဲ့ ဥပဒေမျိုးရှိပြီးသားလို့ ပြောပါတယ်။
အခြားတစ်ယောက်ကလဲ ဒီလိုပဲပြောပါတယ်။ ဂျာနယ်တွေမှာ အရှင်ဘုရားတွေ့ပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းမက ဘာသာခြားယူလဲ ဘာသာခြားက သူ့ဘာသာ ထုံးစံကို ကျင့်သုံးခွင့်မရှိဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းမက ဘာသာတူချင်းယူလို့ရတဲ့ အခွင့်အရေးတိုင်းပဲ ခံစားခွင့်ရှိတယ်တဲ့ ဥပဒေရှိပြီးသားပါတဲ့။ ဒါကြောင့် ဘယ်ဟာအမှန်လဲဆိုတာ စာတွေ့ရော လက်တွေ့ပါမရှောင် မလွှဲပြတ်ပြတ်သားသား သိချင်ပါတယ် ဘုရား။
တစ်နည်းနည်းနဲ့ အရှင်ဘုရား Page ကနေဖြစ်ဖြစ် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော် အလွန် သိချင်နေပါတယ်။ အောင်မျိုးထက် ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ဆရာဝန် နော်ပြည်တော် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန။
အမျိုးစောင့်ဥပဒေ အမှန်တကယ် လိုအပ်တာပါ။ သာမန်လိုအပ်တာတောင် မဟုတ်ဘူး။ မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေတာပါ။ ဒီဥပဒေပေါ်ပေါက်ဖို့ တစ်စိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားလာခဲ့တာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ ဦးဝီရသူရဲ့ အိပ်မက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဥယျာဉ်လေးခုရှိတယ်။ အသေးလေးကတစ်ခု၊ အလတ်စားကနှစ်ခု၊ အကြီးကြီးကတစ်ခုပါ။
အသေးနှင့် အလတ်နှစ်ခုက ဝန်းနံရံရှိတယ်။ ခြံလုံတယ်။ အန္တရာယ်ကင်းတယ်။ ဥယျာဉ်အကြီးကြီးက ခြံခတ်မထားဘူး။ ဒါကြောင့် သဘာဝပန်းအလှတွေလည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အဖျက်ဆီးခံနေရတယ်။ အပြစ်မဲ့ သမင်းလေးတွေလည်း မျိုးသုဉ်းတော့မည့်အခြေအနေရောက်နေတယ်။
နှစ်ပေါင်းရာချီ ခြံမခတ်ဘဲ ရိုးရာမပျက် ဆက်ထားမှာလား....? စားပေါက်ပိတ်မှာ မလိုလားသူတွေရဲ့ မလိုလားမှုတွေကို ထည့်မတွက်ဘဲ ခြံခတ်မှာလား.....?
ဆက်ထားမြဲထားရင်တော့ ကိုယ့်ခြံဟာ သူများခြံဖြစ်သွားမှာနော်။ သဘာဝသယံဇာတတွေ အဖျက်ခံရမှာနော်။ အဖိုးတန်ရတနာလေးတွေ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားမှာနော်။
ဒါက ဥပမာကို ပြောပြတာပါ။
1954 ဥပဒေက ဘာသာခြားနှင့်ရတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ အမွေဆက်ခံမှု အခွင့်အရေးကိုသာ အကာအကွယ်ပေးထားတာပါ။ လင်သေတဲ့အခါ မယား (ဗမာ/ဗုဒ္ဓ) အမွေခံစားခွင့်မရတာမျိုး မဖြစ်လေအောင် အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ ဥပဒေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးစောင့်ဥပဒေကျတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာယောင်ဆောင်ပြီး အယုံသွင်းခံရတာမျိုး၊ သက်ငယ်မိန်းကလေး တွေ မာယာကျော့ကွင်း အဆင်ခံရတာမျိုး၊ လူမသိ၊ သူမသိ ဘာသာကူးပြောင်း လိုက်ရတာမျိုး၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်မရတာမျိုး စတာတွေကို အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ ဥပဒေပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများကို အကာအကွယ်ပေးမယ့် အလားတူ ဥပဒေမျိုးရှိပြီးသားလို့ ပြောတဲ့ ဦးကိုနီက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မူဆလင် ရှေ့နေကြီးတစ်ယောက်ပါ။ NLD ရဲ့ ဥပဒေ အမှုဆောင် အကြံပေး အရာရှိကြီးပေါ့။
ဒီလိုလူတွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကြောင့်ပဲ ချစ်သူကနေ ချဉ်သူဖြစ်မှာ စိုးရိမ်နေတာပါ။
ခင်ဝင့်ဝါ ရဲ့ ဓါတ်ပုံ Album
Posted by drmyochit Sunday, September 08, 2013, under ဓါတ်ပုံ Album | No comments
ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ရေ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ကမ်းပါးတစ်လျှောက် နေအိမ်အချို့ရေနစ်မြုပ်
Posted by drmyochit Sunday, September 08, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
သီပေါ၊ စက်တင်ဘာ ၈။
ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ရေ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် သီပေါမြို့ ကမ်းပါးတစ်လျှောက် နေအိမ်အချို့ ရေနစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် ကမ်းပါးနံဘေး နေထိုင်သူများ မိမိတို့နှင့် နီးစပ်သည့် ဆွေမျိုးများအိမ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရကြောင်း ၎င်းတို့က ပြောကြသည်။
“ရေတက်လာလို့ အိမ်အချို့ကိုယ့် အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် ဖျက်ထားကြရတယ်။ လောလောဆယ်တော့ နီးစပ်ရာအသိအိမ်၊ ဆွေမျိုးသားချင်း အိမ်တွေမှာပဲ နေနေကြရတယ်။ စားတော့လည်း ကိုယ့်အသိ အိမ်မှာပဲ ပေါင်းစားကြပေါ့”ဟု မြစ်ကမ်းပါးဘေးတွင် နေထိုင်သော မုံရွာမြို့မှ လာရောက်ဈေးရောင်းသည့် ဈေးသည်တစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြစ်ရေမှာ အနည်းငယ်ပြန်လည်ကျဆင်းစ ပြုနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံအချို့က ပြောကြသည်။ ရေနစ်မြုပ်သည့် ကမ်းပါးဘေး ရပ်ကွက်မှာ သီပေါမြို့ အတွင်းရှိ ဈေးရပ်ကွက်တွင် အဓိကဖြစ်ကြောင်း ဆုံးရှုံးမှု မရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
“ရေက (၈) ရက်နေ့ည (၁)နာရီကနေ စတက်လာတာ မနက်ကျတော့ ပိုဆိုးလာတယ်။ ပစ္စည်းတွေ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် ရွှေ့ပြီးတော့ ထားလိုက်ရတယ်။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ မီးသတ်တွေကတော့ သတိပေးတာမျိုးတွေ လုပ်နေပါတယ်”ဟု သီပေါဒေသခံတစ်ဦးမှ ပြောသည်။
ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ရေ မြင့်တက်လာရခြင်းမှာ သီပေါအထက်ပိုင်း မြို့များဖြစ်သည့် လားရှိုး၊ သိန္နီ၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ္မတူမြို့များတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး တောင်ကျရေများ စီးဆင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း နှစ်စဉ်ယခုကဲ့သို့ ရေတက်သော်လည်း ယခုလောက်ထိ ဆိုးရွားမှု မရှိဘဲ ယခုအကြိမ်မှာ တတိယအကြိမ် ရေမြင့်တက် လာခြင်းဖြစ်ကာ အနည်းငယ် ဆိုးရွားမှု ရှိလာကြောင်း သီပေါဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရေပိုမိုတက်လာပါက အဆင်သင့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရန် စက်လှေများ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များအား အသင့်အနေအထားဖြင့် စီစဉ်ပေးထားပြီ အလှည့်ကျ ကင်းချထားပါကြောင်း ဈေးရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောသည်။
သီပေါမြို့ ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ရေ၏ စိုးရိမ်ရေအမှတ်မှာ (၆၀၀) သတ်မှတ်ထားပြီး လက်ရှိတွင် မြစ်ရေ၏ ရေအမှတ်မှာ (၄၀၀)တွင် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း မိုးဆက်တိုက် ထပ်မံရွာသွန်းပါက စိုးရိမ်ရေအမှတ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူအချို့ထံမှ သိရသည်။
Posted by drmyochit Sunday, September 08, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
Posted From Zaw Lwin Win
မယ်ရွေးပွဲကို ဂျကာတာ ကနေ ဘာလီမှာ ပြောင်းကျင်းပမယ်
Miss Universe ရွေးပွဲတခုက မြင်ကွင်း
အခုနှစ် မယ်စကြဝဠာ ရွေးပွဲ ဗိုလ်လုပွဲကို အင်ဒို နီးရှား နိုင်ငံ ဂျကာတာ မြို့တော်မှာ မူလက စီစဉ် ထားခဲ့ ပေမယ့် ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမှုတွေ အများ အပြား ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မြို့တော် ကနေ အလှမ်းဝေး တဲ့ ဘာလီမှာ ကျင်းပမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မွတ်ဆလင် နိုင်ငံ တော်တော် များများက ဆန္ဒပြသူတွေက တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စတင် ကျင်းပမယ့် မယ်စကြဝဠာ ရွေးပွဲကို အစ္စလာမ် ဘာသာနဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိတဲ့ ပွဲလို့ ယုံကြည် ယူဆ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲရဲ့ အမှတ် တံဆိပ် အမျိုးသမီး ရေကူး ဝတ်စုံနဲ့ပုံ ကိုလည်း အဖော် အချွတ်နည်းတဲ့ လုံခြည်နဲ့ ပုံကို ပြောင်းပေးဖို့ ပွဲစီစဉ် ကျင်းပသူတွေက ကတိပေး ခဲ့ကြရ ပါတယ်။
ဖွင့်ပွဲကို ဟိန္ဒူ လူမျိုး အများစု နေထိုင်ရာ ဘာလီမှာ ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပြီး သီတင်းသုံးပတ် ကြာမြင့် မယ်လို့ သိရပါတယ်။
မှုခင်းရေရာ ကိစ္စများတွင် ၎င်းတို့စားရိတ်များစိုက်ထုတ်၍ ဆောင်ရွက်နေရဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဆို
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အချုပ်သားမျာအား တရားဥပဒေ အကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် တရားရုံးသို့ ပို့ဆောင်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ သက်သေခံချက်ယူရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်စရိတ်ဖြင့်ကိုယ်သာ သွားလာရပြီး အဓိကတာဝန် ထမ်းဆောင်နေရသော ဒုရဲအုပ်များ အနေဖြင့်လည်း သတင်းအရ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားမိလျှင် ခရိုင်မြို့သို့ ပို့ဆောင်ရခြင်းတို့အတွက် သွားလာစရိတ်များ မရရှိကြကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံမှ သိရသည်။
“လစာအနေနဲ့ကတော့ ကျတော်တို့ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးကို နိုင်ငံတော်က လစာအနေနဲ့ သတ်မှတ် ပေးထားတာက ( ၈ ) သောင်းခွဲပါ။ ထောက်ပံ့ကြေး (၃) သောင်းနဲ့ဆိုရင် (၁) သိန်း (၁)သောင်း ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တရားခံမိတဲ့အမှုမျိုး (၁)လကို (၅)မှုလောက်ရရင် လစာလေးတွေက ပြောင်ရောပဲဗျ”ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား ဖမ်းဆီးထားသည့် ကာလတစ်လျှောက်နှင့် တရားရုံးမှ ပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ မချမချင်း အဆိုပါ အချုပ်သားအတွက် စားစရိတ် (၄၈၂) ကျပ်သာလျှင် ချထားပေးပြီး တရားရုံးသို့ ပို့ဆောင်သည့်စရိတ်များ၊ အချုပ်သားအတွက် လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များအား အမှုတာဝန်ယူရသော အမှုစစ် IO မှသာ စရိတ်စကများ ကျခံရကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံမှ သိရှိရသည်။
“ဒီ့ပြင်ဌာနတွေက အသုံးစရိတ်အနေနဲ့ ပြန်တင်လို့ရတာမျိုး ရှိတယ်။ ကျတော်တို့မှာ မရပါဘူး။ မိတ္တူစာရွက်စာတမ်း၊ ဓာတ်ပုံထုတ်ခတွေ မပါသေးပါဘူး။ တကယ်တမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို လာဘ်စားတယ် လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့လည်း ဘယ်သူ့ဆီကမှ မျက်နှာငယ်ခံပြီးတော့ လာဘ်စားတဲ့အလုပ်၊ အဂတိလိုက်စားတဲ့အလုပ် မလုပ်ချင်ကြပါဘူးဗျာ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ကြပ်တစ်ဦးဖြစ်သူက ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော အချုပ်သားအတွက် နယ်မြို့များမှ ခရိုင်မြို့များသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရကြောင်း ဥပဒေကိစ္စအတွက် ဥပဒေအကြံ တောင်းယူရာတွင် (၂) ရက်ခန့် ကြာမြင့်တတ်ကြောင်း တရားရုံးသို့ သက်သေခံရန် လိုအပ်ပါကလည်း သက်သေခံသွားရကြောင်း အသက်မပြည့်သေးသည့် အချုပ်သားမျိုး ဖြစ်ပါက မန္တလေးအထိ ပို့ဆောင်ပေးရကြောင်း ထိုစရိတ်များမှာ အမှုစစ်များ၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်ကာ ကိုယ့်စရိတ်နှင့်ကိုယ် သွားလာရကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံမှ သိရှိရသည်။
ယင်းသို့ စားရိတ်များ ကုန်ကျသည့်အတွက် လစာနှင့် မလောက်ငှသဖြင့် မိမိနှင့် နီးစပ်သူများထံမှ အကူအညီတောင်းခံရကြောင်း ထိုကိစ္စများအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အခက်အခဲများကို လွှတ်တော်တွင် တင်ပြပေးမည့်သူများ မရှိပါကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံမှ သိရှိရသည်။
၎င်းသို့ လိုအပ်ချက်များအား နိုင်ငံတော်က ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါက အဂတိလိုက်စားမှုများ ထိုက်သင့်သလောက် ပပျောက်သွားမည်ဖြစ်ကာ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများမှ
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး အတွင်းရှိ နယ်မြို့များ၊ ခရိုင်မြို့များတွင် ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လက်ရှိ ရရှိနေသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လစာများမှာ ရဲတပ်သားတစ်ဦးလျှင် (၅) သောင်းကျပ်၊ ဒုတပ်ကြပ်တစ်ဦးလျှင် (၆)သောင်း (၁)ထောင်ကျပ်၊ တပ်ကြပ်တစ်ဦးလျှင် (၆)သောင်း (၇)ထောင်ကျပ်၊ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးလျှင် (၈)သောင်း (၅)ထောင်ကျပ်၊ ရဲအုပ်တစ်ဦးလျှင် (၉)သောင်းကျပ် အသီးသီးရရှိကြကြောင်း ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ငွေကြေးအဖြင့် ကျပ် (၃)သောင်းဆီ တစ်ပြေးညီထောက်ပံ့ပေးထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံမှ သိရှိရသည်။
Miss Internetဆုရ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ခင်ဝင့်ဝါကို သောင်းသောင်းဖြဖြကြို
Miss Supranational Myanmar ခင်ဝင့်ဝါ သည် အမိမြန်မာပြည်သို့ ဆုများသယ်ဆောင်ကာယနေ့ စက်တင်ဘာ(၈) ရက်နေ့ နေ့ လည်၁၂း၃၀နာရီမှာရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ုပြန်လည်ရောက်ရှိ လာခဲ့ရာကြိုဆိုကြသူများသောင်းသောင်းဖြဖြရှိခဲ့သည်။
Miss Supranational 2013ပြိုင်ပွဲသည်ကမ္ဘာတတိယအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံတကာအလှမယ်ပြိုင်ပွဲကြီး
ဖြစ်ပြီး Miss Supranational Myanmarခင်ဝင့်ဝါ ရဲ့ ပြိုင်ပွဲ ကာလ တလျှောက်ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း ကမြန်မာ ပရိသတ်များ ကအွန်လိုင်းမှတခဲနက်အားပေးခဲ့မူကြောင့်Miss Internetဆုရကိုရရှိခဲ့သလိုMost Beautiful Girl in the World, People Choice Award နှင့်Face of Miss Supranational ဆုတို့ ကိုပါရရှိခဲ့သည်။
(ခင်ဝင့်ဝါမှာနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွင်ဒုတိယမြောက် Miss Internet ဆုရမယ်မြန်မာဖြစ်ခဲ့ သလို နိုင်ငံ တကာပြိုင်ပွဲ ဆန်ကာ တ င်လက်ရွေးစင်Finalist စာရင်းဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအလှမယ် ဖြစ်လာခဲ့ သည်။)ယင်းသို့ အမိမြေ အတွက်ဂုဏ်ယူဖွယ်ဆုများ ဆွတ်ခူး ရယူလာခဲ့သူမြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင်အ လှမယ်လေး နဲ့ အတူအင်တာနက်မှတစ်ဆင့်အားပေးခဲ့ကြသူပရိသတ်များပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်ဆုံတွေ့ မူလည်းဖြစ်သည့် အတွက်မင်္ဂလာရှိသောပုံရိပ်များအဖြစ်ပေါ်ပြူလာကဂုဏ်ယူစွာတင်ဆက်လိုက်ရပါသည်။
AKSketch v15.0 For Win Xp/7/8 x64&x86 64MB
Posted by drmyochit Sunday, September 08, 2013, under နည်းပညာ | No comments
ဓာတ်ပုံတွေကို ကာလာပန်းချီ ခဲခြစ်ပန်းချီ ဆေးရေးပန်းချီ အဖြစ်ပြောင်းချင်တဲ့
သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ မိမိစွမ်းသလို ထပ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်
လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းလွယ်ပါတယ် အသုံးပြုမယ်ဆို အောက်မှာရယူနိုင်ပါတယ်
Dwonload x86 (or) 32b>>>>mirrorcreator (or)zippyshare
Download x64 >>>> mirrorcreator (or)zippyshare
သူမှာက လိုင်စင်မပါဘူး ရက်ပြည့်တဲ့အခါ Trial Reset ကိုအသုံးပြုပါ
AKVISTrialReset ကိုကလစ်နှစ်ချက်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ
အမျိုးသမီးများ မုဒိန်းကျင့်ခံရမှုမှ ကင်းဝေးစေဖို့ မှတ်စရာများ
Posted by drmyochit Sunday, September 08, 2013, under နည်းလမ်းများ | No comments
မုဒိမ်းမှုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာ ထောင်ထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ မုဒိမ်းသမားတွေကို အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဆီက အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စေနိူင...်တဲ့ အချက်အလက် တွေကိုလေ့လာပြီး ပြန်လည်ဝေမျှ လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
(၂) ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ အ၀တ်အစားပါ။ မုဒိမ်းကောင်တွေဟာ အ၀တ်အစားအလွယ်တကူ ချွတ်ပစ်လို့ရမယ့် မိန်းကလေးမျိုးကို ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ မုဒိမ်းကောင် အများစုဟာ အ၀တ်အစားတွေကို ဖြတ်ပစ်ဖို့
(၃) မုဒိမ်းကောင်တွေဟာ ဖုန်းအသုံးပြုနေတဲ့မိန်းကလေးမျိုး၊ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက တစ်ခုခု ရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးမျိုး ဒါမှမဟုတ် လမ်းလျှောက်ရင်း တစ်ခုခု အာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို ရှာဖွေကြပါတယ်။
Birth control pills for emergency contraception ပုံမှန် တားဆေးကို အရေးပေါ် အသုံးချနည်း
Posted by drmyochit Sunday, September 08, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
သမီးတို့ချစ်သူ ၂ ယောက်ဟာ ရာသီလာပြီး ၁၄ ရက်အတိမှာ မရည်ရွယ်ဘဲနေမိပါတယ်ရှင်။ သမီးဆီမှာ Morning after pills ကလဲဝယ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ Marvelon 28 ကဒ်ထဲက ပထမဆုံး ၄ လုံးကို သောက်ပါတယ်။ နောက် ၁၂ နာရီ ခြားပြီး နောက်ထပ် ၄ လုံးကို ဆက်သောက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်နေ့တွေ မှာတော့ ကျန်တဲ့ ၉ ကနေဆက်ပြီး သောက်ပါတယ်။ မလိုလားလိုလား မကျိန်းသေတဲ့အတွက် ဆက် သောက်ပါတယ်။ အခုဒီနေ့ဆိုရင် သမီးမှာ ၂၈ ရက်ဖြစ်လို့ လာခါနီးဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ်ဝန်ရှိမှာ စိတ်ပူနေရတဲ့ အတွက် သောက်လိုက်တဲ့ဆေးနည်းဟာ မှန်မမှန် သိပါရစေ။ % ဘယ်လောက် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတာလဲ သိပါရစေ။
တနေ့ ၁လုံး၊ တလ ၂၈ လုံး သောက်ရတဲ့ အများဆုံးသုံး ကိုယ်ဝန်တားစားဆေးတချို့တွေကို အရေးပေါ် တားဆေး အနေနဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးမဟုတ်ပါ။ Levonorgestrel ပါတာမျိုးကိုမှ အဲလို အရေးပေါ် အနေနဲ့သုံးနေခဲ့တာ ၁၉၇ဝ ကျော် ကတည်းက ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအတူတူပါတဲ့ Morning after pill ဆေး လောက်တော့ မထိရောက်လှဘူး။
အမေရိကားမှာ အရေးပေါ်တားဆေးတွေထဲက Ella (Ulipristal acetate) ဆေးကို ဆရာဝန်လက် မှတ်နဲ့ သာ ရောင်းတယ်။ Plan B One-Step, Next Choice One Dose, Next Choice and Levonorgestrel Tablets (progestin) တွေကို အသက် ၁၇ နှစ်ကျော်သူ ကျား-မ ဘယ်သူမဆို ဝယ်လို့ရတယ်။ နေ့တိုင်း သောက်ရတဲ့ တားဆေးတွေထဲမှာ Progestin နဲ့ Estrogen တွေပါတယ်။ Marvelon ဆေးထဲမှာ Ethinyl-estradiol နဲ့ Desogestrel ပါတယ်။
အရေးပေါ်ဆိုတာ မရည်ရွယ်ဘဲ အတူနေမိတဲ့နောက် ကိုယ်ဝန်မရချင်ရင် ၁၂ဝ နာရီအတွင်း သောက်ရတဲ့ ဆေးဖြစ်တယ်။ Plan B One-Step နဲ့ Next Choice လိုမျိုး Levonorgestrel ပါတာဆိုရင် တခါတည်း သောက်လို့ရတယ်။ ပုံမှန်တားဆေးကို အရေးပေါ်သုံးရင် ကျန်တဲ့ဆေးအပိုကို မသောက်ပါနဲ့။ မထူးပါ။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးသာ ပိုခံစားရမယ်။
Progestin-only pills အရေးပေါ်တားဆေး
နောက် ၁၂ နာရီမှာ သောက်ရန်
Ella ၁ -
Next Choice ၂ -
Plan B ၂ -
Plan B One Step ၁ -
Combined progestin and estrogen pills ပုံမှန်တားဆေး
Alesse ၅ ၅
Aviane ၅ ၅
Cryselle ၄ ၄
Enpresse ၄ ၄
Jolessa ၄ ၄
Lessina ၄ ၄
Levlen ၄ ၄
Levlite ၅ ၅
Levora ၄ ၄
Lo/Ovral ၄ ၄
LoSeasonique ၅ ၅
Low-Ogestrel ၄ ၄
Lutera ၅ ၅
Lybrel ၆ ၆
Nordette ၄ ၄
Ogestrel ၂ ၂
Ovral ၂ ၂
Portia ၄ ၄
Quasense ၄ ၄
Seasonale ၄ ၄
Seasonique ၄ ၄
Sronyx ၅ ၅
Triphasil ၄ ၄
Tri-Levlen ၄ ၄
Trivora ၄ ၄
Emergency Contraception (2) အရေးပေါ်တားဆေးများ (၂) ကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
အချိန်လေး တစ်မိနစ်ခွဲလောက် ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ
Posted by drmyochit Sunday, September 08, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
တစ်ခါတုန်းက လူတစ်ယောက်မှာ မိန်းမလေးယောက် ရှိတယ်။ သူက မိန်းမလေးယောက်မှာ စတုတ္ထ မြောက် မိန်းမကို အချစ်ဆုံးပေါ့။ သူ့ကို အစစအရာရာလဲ ဂရုစိုက်တယ် အရမ်းလည်းတွယ်တာတယ်။
သူပြီးရင်တော့ တတိယမြောက် မိန်းမကို အချစ်ဆုံးပေါ့။ တတိယမြောက်မိန်းမက လှပကျော့ရှင်းတော့ သူ့မိတ်တွေ အပေါင်းအသင်းတွေ ရှေ့မှာရော ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာရော မကြာခဏ ခေါ်သွားလေ့ရှိတယ်။
ဒုတိယမြောက် မိန်းမကိုတော့ ဟိုနှစ်ယောက်ကို ချစ်သလို မချစ်ပေမယ့် အားကိုးတယ်။ ပြသနာတစ်ခုခု ကြုံတိုင်း သူနဲ့တိုင်ပင်တယ်။ သူကလည်း အကူအညီပေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ပထမမြောက်မိန်းမကိုတော့ သူကလုံးဝမချစ်ဘူးတဲ့။ သူကမချစ်တာတောင် ပထမမြောက်မိန်းမ ကတော့ သူ့ကိုကောင်းရှာတယ်။ ဂရုလဲစိုက်တယ်။
အဲလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ အဲဒီလူကြီး နေမကောင်းဖြစ်ရော။ သူ့ကိုသူ သေရတော့မယ်လို့ သိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့မိန်းမလေးယောက်ကို ခေါ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စတုတ္ထမြောက်မိန်းမကို မေးတယ် ''ငါသေရင် မင်းငါနဲ့ အတူ လိုက်သေနိုင်မလားပေါ့ '' အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါ စတုတ္ထမြောက် မိန်းမက ငြင်းလိုက်တယ်။ သူလိုက် မသေ ပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့။
အဲဒါနဲ့ တတိယမြောက် မိန်းမကိုမေးတယ်။ တတိယမြောက် မိန်းမကပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်။ ရှင်သေရင် ကျွန်မက နောက်တစ်ယောက်
ဒုတိယမြောက် မိန်းမကိုလဲမေးပြန်တယ်။ ဒုတိယမြောက် မိန်းမကတော့
ဒီလိုပြောတယ်။ ရှင်နဲ့အတူတူ မသေပေးနိုင်ပေမယ့် ရှင့်အုတ်ဂူမှာ ပန်းစည်းလေး လာချပေးမှာပါတဲ့။ ရှင့် အတွက်လဲ ဆုတောင်းပေးမှာပါတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ပထမမြောက် မိန်းမပဲကျန်တော့တာပေါ့ ။ အဲဒါကြောင့် ပထမမြောက်မိန်းမ ကိုမေးတော့ သူကတစ်ခြားမိန်းမတွေနဲ့ မတူဘူး ဒီလိုဖြေတယ်။ ကျွန်မက ရှင့်နဲ့အမြဲတမ်း အတူတူရှိနေ မှာပါတဲ့။ ရှင်ဘယ်သွားသွား ကျွန်မလိုက်ခဲ့မှာပါတဲ့။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာလည်း ပုံပြင်ထဲကလူကြီးလို ဇနီးလေးယောက်ရှိပါတယ်။
စတုတ္ထမြောက် ဇနီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်ချစ် အချိန် တန်တော့လဲ ထားခဲ့ရတာပါပဲ။
တတိယမြောက် ဇနီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာကြွယ်ဝပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ မရှိတော့ရင် အဲဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာ တစ်ခြားသူလက်ထဲပဲ ရောက်သွားမှာပါ။
ဒုတိယမြောက် ဇနီးကတော့ မိသားစုပေါ့။ ဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ့်မိသားစုကို သံယောဇဉ်ရှိပါတယ်ပြောပြော ကျွန်တော်တို့ သေသွားတဲ့အချိန်မှာ သူတို့က လွမ်းဆွတ်တမ်းတပြီး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ဖို့ ဆုတောင်း ပေးရုံကလွဲလို့ ကျန်တာ မတတ်နိုင်ပါဘူး။
ပထမမြောက် ဇနီးကမှ ကျွန်တော်တို့သေရင် ကျွန်တော်တို့နောက်ကို ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်လာမယ့် ကျွန် တော်တို့ အသက်ရှင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပြုလုပ်ခဲတဲ့ ကောင်းမှု /မကောင်းမှု / ကုသိုလ် ကံ / အကုသိုလ် ကံ တွေပေါ့ ဗျာ............။
ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဗဲရီးဂွတ်ပေါ့ မှ ဘာသာပြန် တင်ဆက်သည်။
မော်ဒယ်လ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် သတင်းကောင်း
GTR Media Co.,Ltd မှ မော်ဒယ်လ်လုပ်ကိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားသူများ နှင့် တက်သစ်စမော်ဒယ်လ် များစွာ အလိုရှိပါသည်။
လာရောက်လျှောက်ထားသော မော်ဒယ်လ်များစွာထဲမှ သတ်မှတ်အရည်အချင်းကိုက်ညီသော မော်ဒယ်လ် များကို GTR Media Co.,Ltd မှ ပင်တိုင်မော်ဒယ်လ်များအဖြစ် ထားရှိသွားမှာဖြစ်ပြီး မဂ္ဂဇင်းကာဗာများ ၊ ပွဲများ အပြင် အခြားများစွာသော အစီအစဉ်များအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
(မော်ဒယ်လ်လုံးဝမလုပ်ဖူးသေးသည့်မော်ဒယ်လ်များနှင့် တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ်များကို ဦးစားပေးရွေး ချယ်သွားပါမည်)
စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် gtrcarmagazine@gmail.com သိူ့ အလှဓာတ်ပုံ များ ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။
GTR Car Journal Page သို့ လည်း message ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သော ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ အနေဖြင့် မပျက်မကွက် မြည်းစမ်း သင့်သည့် အစားအစာ (၁၀)မျိုးကို CNNသတင်းဌာနမှ အော်စတင်ဘုရ်ှက စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖော်ပြ ထားသည့် လမ်းညွှန်မှုကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မြန်မာ့အစားအစာတွေထဲမှာ ဂုဏ်သတင်း အကျော်ဇောဆုံးကတော့ လက်ဖက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လက်ဖက်ပ င်က အရွက်ကို အချဉ်ဖောက်ထားတာပါ။ အဲဒီအရွက်ကို ဒီအတိုင်းလည်း စားကြတယ်။ အချိုတည်းသလို ပုံစံပေါ့။ လက်ဖက်သုပ်ကတော့ လက်ဖက်ရွက်လေးတွေကို အသုပ်ပုံစံမျိုး ဖန်တီးထားတာပါ။ လက်ဖက်သုပ်အတွက် ချဉ်ပြီး နည်းနည်းခါးတဲ့ အရွက်လေးတွေကို ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးကွင်းကြီးတွေ၊ ပဲခြမ်းကြော်ရွရွ၊ မြေပဲ၊ ပဲလုံး၊ ဆီချက်၊ ခပ်စပ်စပ် ငရုတ်သီးတွေအပြင် ကြက်သွန်နဲ့ပါ ရောပြီး နယ်ရပါတယ်။ တကယ့်ကို ဘက်စုံပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာပါ။ ဒါကို သရေစာ အဖြစ်လည်း စားနိုင်တယ်။ ထမင်းနဲ့တွဲပြီး ဟင်းအနေနဲ့ စားလို့လည်း ရတာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လက်ဖက်သုပ်ဟာ အာရုံနိုးကြားစေတဲ့ ဆေးဝါးလည်း ဖြစ်ပြန်တယ်။ လက်ဖက်များများစားရင် အိပ်မပျော်ဘူးလို့ မြန်မာလူမျိုး တော်တော်များများက ပြောကြတယ်လေ။
ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ရေ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ကမ်းပါးတစ်လျှောက်...
မှုခင်းရေရာ ကိစ္စများတွင် ၎င်းတို့စားရိတ်များစိုက်ထုတ်၍...
Miss Internetဆုရ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ခင်ဝင့်ဝါကို သော...
အမျိုးသမီးများ မုဒိန်းကျင့်ခံရမှုမှ ကင်းဝေးစေဖို့ မ...
မော်ဒယ်လ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် သတင်းကောင်း...
သစ်သီးနှင့် သစ်သီးဖျော်ရည်က ဆီးချိုအတွက် ဆန့်ကျင်ဘ...
အီရတ်ရှိ အမေရိကန်အကျိုးစီးပွား များကို တိုက်ခိုက်ရ...
ကပွဲက ကောင်မလေးတွေ အရမ်းဟော့လို့ ခရော့ခ်ျကို ပွဲတက...
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းရှိသည့် မူဆယ်ြ...
ကျီးပင်ချောင်းတူးဖော်ရန် ချောင်းဘေးရှိ အိမ်ခြေ ၁၀၀...
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားမျ...
Facebook ကို အလန်းဆုံး၊အမြန်ဆုံး၊နှင့် Function အစ...